ဝုဗ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင် မန်ဖန်တွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၄ ချက် – FBV SPORT NEWS
ဝုဗ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင် မန်ဖန်တွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၄ ချက်
December 29, 2020 By admin Sports News
ဝုဗ်ပွဲမတိုင်ခင် မန်ဖန်တွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၄ ချက်
ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ဝုဗ်ပွဲမတိုင်ခင် ကျွန်တော်တို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖန်ကြီးတွေ သိထားသင်းတဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပွဲမလာခင် အပျင်းလေးပြေ ဗဟုသုတလည်းရအောင် ဝုဗ်နဲ့ပွဲမတိုင် ခင် မန်ဖန်တွေသိထားသင့်တဲ့ အချက် ၄ချက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁..ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဝုဗ်အသင်းနှင့်ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းပွဲစဉ် (9) ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်မှု လုံးဝ မရှိထားသေးပါဘူး။(9)ပွဲ ကစားထားရာမှာ (6)ပွဲနိုင်ပြီး (3)ပွဲသရေကျထားပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ယူနိုက်တက်ဟာ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းစဉ်လာကောင်းကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
၂.တန်းဆင်းသွားတဲ့ ဝုဗ်အသင်းတန်းပြန်တက်လာပြီးနောက်မှာ ယူနိုက်တက်တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်´ (4)ပွဲမှာ (1)ပွဲရှုံးပြီး (3)ပွဲသရေကျခဲ့ပါတယ်၊။
၃. ဒီအချက်ကတော့ ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်အကြောင်းပါ။ ဖာနန်ဒက်ဟာ သူ ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(28)ပွဲမှာ တစ်ပွဲကိုသွင်းဂိုးသို့မဟုတ် ဖန်တီးမှု (29%) အထိပါဝင်ပတ်သတ်မှုရှိခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးသော ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲတိုင်းလိုလို ပါဝင်ကစားပေးနေရတဲ့အတွက် ပွဲပန်းနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
တချို့မန်ဖန်တွေနဲ့ အသင်းသားတွေဆို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေ ဘရူနိုယူနိုက်တက်လို့ လှောင်ပြောင်ပြီးတောင်ခေါ်နေကြတဲ့အထိပဲ.။ ပြီးခဲ့တဲ့ လက်စတာပွဲမှာ ဖာနန်ဒက်ဟာ ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ပင်ပန်းနေပုံရပါတယ်။ ဒါကိုမန်ဖန်တွေသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီတော့ ဒီညကန်မယ့်ပွဲမှာ အားပြည့်အင်ပြည့်နဲ့ဖာနန်ဒက်ကစားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
နံပတ်၄.ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်ဟာ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်(28)ပွဲ ကစားထားရာမှာ (31)ဂိုးအထိဂိုးပါဝင်ပတ်သတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အင်ဒီကိုလ် နယူကာဆယ်အသင်းအတွက်ကစားပေးခဲ့တုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ် ပထမဆုံး(28)ပွဲကစားပြီး (32)ဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်ပိုင်း ဖာနန်ဒက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပထမဆုံးကစားခဲ့တဲ့ (28)ပွဲကစားပြီးနောက် ဂိုးအများဆုံးပါဝင်ပတ်သတ်သည့် ပထမဆုံးကစားသမား ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် ဒီညပွဲမှာလည်း ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ဂိုးသွင်းမှုတွေ အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်မခံပဲ ဝုဗ်အသင်းကို ကွင်းလယ်လူ သရဲနီစိတ်ဓါတ်ပြင်းလွန်းတဲ့ ဖာနန်ဒက်က ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ဒါပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ယူနိုက်တက်နိုင်မယ် ယုံကြည်ရင် အလံလေးတွေထောင်ခဲ့ပေးကြပါလို့ပြောရင်း ဝုဗ်ပွဲကို အတူတူကြည့်ရအောင်ဗျာ.
မန်ယူကိုလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဆိုလ်းရှားကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဝုဗ်ရဲ့ကျောနံပါတ်၉ တိုက်စစ်မှူး